Iindidi ezili-10 zeCryptocurrency Mining Resources
NguPeter Kent, uTyler Bain
Itoni yezixhobo eziluncedo zikwi-intanethi ezinqwenelekayo kwimigodi ye-cryptocurrency okanye abo banomdla wokufunda ngakumbi ngesihloko. Ezi imigodi yemali yedijithali izixhobo zohlulwe zangamacandelo alishumi ahlukeneyo, ukusuka kwizixhobo ezinokukunceda ukulandelela amaxabiso ekhredithi yedijithali ukuya kumaphepha amhlophe. Ukuphonononga ezi zixhobo kunokugcina nawuphi na umnqweno we-crypto miner exakekile iiyure ezininzi zolonwabo!
Abazingeli bemarike ye-Cryptocurrency
Oku kulandelayo ziziza ezibonelela ngamanqanaba otshintshiselwano kunye nexabiso lemarike kwi-cryptocurrensets, eminye yemithombo ethembekileyo kwishishini. Qaphela ukuba kwezinye iimeko ukutshintshisana kuye kwondla idatha engalunganga kwiindawo zokulandelela, kodwa ngokubanzi idatha ilungile:
Vula iKapa yentengiso
Izixhobo zokuqikelela inzuzo ye-Cryptocurrency
Sebenzisa ezi zixhobo rhoqo xa ucinga ukuba yeyiphi imali yedijithali emayini kwaye xa ucinga ngokwanda. Nalu uluhlu olukhawulezayo lwezixhobo ezithile ezithandwayo zokufumana inzuzo:
Iphepha ledijithali yemali elibomvu
I-Reddit yenye yeendawo eziphambili zosasazo lwentlalo yoluntu lwe-cryptocurrency yokuxoxa kunye nokuphikisana ngezihloko zomhla ezihamba phambili. Jonga olu luhlu lwamanye amaphepha aphezulu e-Reddit e-cryptocurrency.
Ukuba ufuna eyahlukileyo, yongeza nje igama ledigital cryptocurrency okanye uphawu lwakho kwisiphelo se-URL; Ezinye iidigital reddits zisebenzisa igama, ezinye iisimboli- umzekelo, www.reddit.com/r/XRP/ kunye www.reddit.com/r/zcoin/. Ngenxa yeengxabano, abanye abanakho ukusebenzisa kwaye kufuneka beze nenye into (i-TRON isebenzisa i-www.reddit.com/r/TRXTrading/, umzekelo), ke kuya kufuneka ukhangele.
r / iDashPay
r / ZEC
Abahloli beBlockchain banikezela ngendlela elula yokuphicothwa iibhlokhi ngqo kwi-browser yakho. Banokukhangela iibhloko, ukuthengiselana, ii-hashes, kunye needilesi. Nalu uluhlu lwezinto eziluncedo zokuhlola kunye ne-Ethereum blockchain.
I-blockchair isebenza nge-Ripple, i-Bitcoin Cash, i-Litecoin, i-Bitcoin SV, i-Dash, i-Dogecoin kunye ne-Groestlcoin blockchains. Ngezinye ii-cryptocurrencies, zama umbuzo weinjini yokukhangela. Uninzi lwee-cryptocurrensets ezincinci azithandwa ngokwaneleyo ukuba zibe nabaphandi, kodwa ezinye zinazo. Jonga aba baphandi be-blockchain:
Bitcoin Blockchain abahloli
XBT.eu : (Qaphela, i-XBT yenye ikhowudi yemali eya kwi-BTC)
I-Ethereum Block Abahloli.
Abanye abaHloli beBlockchain
Ngelixa abaphandi be-blockchain bezixhobo ezifanelekileyo zokufumana idatha yokubhaliweyo kunye nenombolo yee-blockchains zakho ozithandayo, abanye abantu abayilayo bayithathile le nyathelo inyathelo elingaphaya. Zininzi izinto ezibonakalayo ezibonakalayo zedatha yendawo yeBitcoin kunye ne-cryptocurrency. Nazi ezinye zeentando zethu:
I-Bitcoin Big Bang
Ukuboniswa kweXabiso leMakethi
I-Bitcoin Blockchain Matrix
Iigrafu zenethiwekhi zeBitcoin
Idatha ye-idijithali yemali kunye namanani
Idatha ye-Cryptocurrency yedatha, uthelekiso kunye newebhusayithi yezibalo kunokuba luncedo kakhulu, kukunceda uthelekise phakathi kwee-cryptocurrensets. Nazi izihlanganisi zedatha ye-cryptocurrency elungileyo:
I-51% yokuThelekiswa kweendleko
Iimpawu zeMali zeBitcoin
Imali yeDijithali yeWiki
Ngelixa iWikipedia.org inamaphepha uninzi lweyona mali iphambili, la maphepha ahlala eneenkcazo ezimfutshane kwaye ingezizo izixhobo ezinzulu zokuntywila ezinokuthi zigubungele yonke imiba yemali yesiqhelo. Ungakhathazeki, njengoko ezinye ii-cryptocurrensets zazo zinazo (okanye ezininzi!) Izalathiso zesitayile se-Wiki ezichaza uninzi lwemiba kunye nezinto ezinxulumene naleyo ye-cryptocurrency.
Ezinye zee-Wikis zilandelayo zikwagubungela ezinye iimali ezigcina imali. Umzekelo, i-BitcoinWiki.org inolwazi kungekuphela kweBitcoin, kodwa nezinye ii-cryptocurrensets ezininzi, nazo.
UGithub Ethereum Wiki
UJameson Lopp ungumsebenzisi osebenzayo kunye nonjiniyela kwisithuba se-bitcoin, kwaye uqokelele uluhlu olubanzi kakhulu lwezixhobo ezikhethwe kuluntu lweBitcoin kwindawo enye. Unokufumana izixhobo eziluncedo, izikhokelo zomsebenzisi, kunye nezinye izixhobo eziluncedo kwindawo yakhe.
Inkqubo ye- ICypherpunk Manifesto , Ebhalwe ngu-Eric Hughes, luxwebhu olusisiseko uninzi lwabasebenzisi be-cryptographer kunye nabasebenzisi be-cryptocurrency abayifundileyo kule minyaka idlulileyo. Yintshayelelo enomdla kwezopolitiko ezisemva kwemvelaphi ye-cryptocurrency.
Amaphepha amhlophe e-cryptocur lwemali
Inkqubo ye- Ukuqhuma kweBitcoin kunye ne-cryptocurrency Okwenzekileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo konke kwaqala ngokukhutshwa kukaSatoshi Nakamoto kwengcinga yakhe kwi Uluhlu lwePosi lweCypherpunk ( oovimba abalapha ), Ikhowudi ethile kunye nephepha elimhlophe elihamba nayo.
Ukusukela ngoko, uninzi (olungenakubalwa?) Amaphepha amhlophe akhutshiwe, echaza iintlobo ngeentlobo zeemali ze-cryptocurrency kunye neenkqubo ze-blockchain. Jonga olu luhlu lufutshane lwamakhonkco ukuze ufunde ezinye zeempepha ezaziwa kakhulu ze-cryptocurrency kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ungakhangela abanye, ewe, kodwa ii-cryptocurrensets ezininzi zaziswa ngaphandle kwamaphepha amhlophe (iLitecoin kunye neDogecoin, umzekelo).
IZiko leSatoshi Nakamoto
Inkqubo ye- Indawo yeSatoshi Nakamoto Institute iqulethe yonke imibhalo eyaziwayo kaSatoshi Nakamoto (nokuba ngubani / ungubani na!), kunye namanye amaxwebhu amaninzi asebenzela ukuguqulela iBitcoin kwibali elibanzi lokufihla kunye nenkululeko. Kuyafuneka ukufundwa kunye nendlela entle yeB Bitcoin kunye ne-cryptocurrency abanomdla wokuya emngxunyeni womvundla.
Ndiyikhusela njani ikhompyuter yam
spasm phantsi kwembambo yasekunene
yenza ntoni i-entresto
uyifaka njani iithayile zomgangatho weceramic
ngaphezulu kwekhawuntari yeswekile amayeza